Momba anay - Changlin Industrials Co., Ltd.
Changlin dia mandrakotra ny velaran'ny velaran-tany 17000 metatra toradroa ary manana fitaovana teknika mandroso maro, ekipa mpamorona za-draharaha ary mpiasa mahay mihoatra ny 150. Manana tsipika famokarana roa lehibe izahay: stitching bag and line and Heat seal bags line. Ny fahafahan'ny kitapo isam-bolana dia singa 1 tapitrisa, aondrana any Eropa, Amerika avaratra, Amerika atsimo, aostraliana, pasifika aziatika, afovoany atsinanana ……
Miaraka amin'ny fanahin'ny "fanoloran-tena, fanavaozana, fiaraha-miasa, fikirizana" ary ny fomba fiasa "mahomby, mahavita zavatra, mifampiresaka, miavaka", ny mpiasa rehetra dia manome ny mpanjifa taloha sy vaovao vokatra sy serivisy tsara indrindra. Miorina amin'ny zavatra niainanay 20 taona mahery tamin'ny fanamafisana sy ny fanjairana teknika, dia nandalo ny fanamarinana ny ISO9001 izahay, manana ny tatitra amin'ny SA8000, SEDEX, L'Oréal, LVMH, ary miara-maniry foana izahay miaraka amina marika lehibe be loatra , toy ny etsy ambany: L'OREAL （Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny YSL, HR, LANCOME, VICHY, LA ROCHE-POSAY, Kiehl's),LVMH （Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny BVLGARI, Givenchy ， GUERLAIN, SEPHORA, Tombony） 、 BURBERRY 、 ESTEE LAUDER (Anisan'izany fa tsy voafetra ho an'i LA MER, Jo Malone London, CLINIQUE, Bobbi Brown, MAC) IS SISLEY 、 L'OCCITANE 、 CLAR 、 UNILEVER 、 P & G 、 ISDIN 、 NUXE 、 LACOSTE, sns.
Raha jerena ny fivoarana maharitra, ankehitriny dia maro kokoa ny fitaovana ampiasaina amin'ny tontolo iainana no ampiasaina amin'ny faritra maro eto: Ny landihazo sy rongony voajanahary sy voajanahary dia mahazatra na aiza na aiza, eo an-dàlana ny RPET Material, fa ny Recycled EVA na Recycled TPU kosa ny fironana vaovao. Ny fitaovana fibre zavamaniry vaovao toy ny lamba mananasy sy ny akondro dia novolavolaina sy ampiasaina. Changlin dia manolo-tena amin'ny famolavolana vokatra fiarovana ny tontolo iainana bebe kokoa, ary manome ny herintsika manokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana eto an-tany.
Omeo anay ny volavolanao, tanterahinay izy io!
Manome toky anao izahay fa Changlin dia ho iray amin'ireo mpiara-miasa mividy azo antoka indrindra!
Ny fanirianay ny hanome anao ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy tena tsara, ary mandray tsara ny OEM / ODM izahay.
efa nandalo ny fanaraha-maso ny andry L'Oréal, LVMH, SEDEX 4 izahay, manana ny fanamarinana ny ISO9001 sy SA8000